Ndezvipi zvakanakira uye nekunetseka kweanogadzirwa masks Vagadziri uye Vanotengesa - China Factory - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Ndezvipi zvakanakira uye nezvakaipa masks anokandwa?
Zvinokanganisika zvemaski anogadziriswa: masks anoraswa haagone kushandiswa kuchenesa, simba ravo uye kusimba hazvina hutano, zvinobvarika zviri nyore, uye zvinogona kungoshandiswa kwemaawa masere.
Disks dzinogadzirwa dzinofukidza nzvimbo dzakasiyana siyana nenzvimbo dzakadai sezvikoro, kugadzira chikafu, makambani ekugadzira zvemagetsi, nezvimwewo. Idzi inzvimbo dzinokoshesa vanhu. Hutachiona hwacho hunotapurika zviri nyore. Naizvozvo, kupfeka chinoraswa mask haingochengetedze munhu wacho chete, asi zvakare chinodzivirira munhu wacho uchichengetedzawo vamwe, zvichideredza zvakanyanya kupararira kwehutachiona nechirwere. DzeBonde.
1. Sezvo mamiriro ekunze anodziya, masks matema haana kugadzikana kupfeka, kupisa zvakanyanya uye kwete kufema. Naizvozvo, mumwaka uno, masiki ekurapwa anogona kurapwa akakodzera kudzivirira general guruva kana poplar.
2. Geza maoko ako uye kumeso usati wapfeka mask.
3. Kutanga kusiyanisa kumberi uye kumashure kwemaski. Kazhinji kutaura, iyo dema rima rinotarisana nechokunze, uye yakareruka ruvara iri pedyo nechiso. Tambo yesimbi iri padivi.
4. Ichi chigadzirwa chinofanirwa kunge chakachengetwa mune imwe humidity humidity isingapfuuri makumi masere muzana, pasina gasi rinoputika, inotonhorera, yakaoma uye ine mhepo, uye yakachena nzvimbo.
Kamwe-shandisa kurapa kwechiso kumeso